Saynisyahannada waxay ogaadeen in soonku kicinayo dib-u-cusboonaysiinta unugyada - Afrikhepri Fondation
Talaado, Ogoosto 11, 2020
Cilmi-baadhayaashu waxay ogaanayaan in soomaayo hurdo-abuurka unugyada
Soomalida qatarta ah
Un dhaqammo badan oo caafimaad ayaa muujinaya inay wax ku ool yihiin dhowr siyaabood. Saynisyahannada hadda waxay ogaadeen cadaymaha ugu horreeya ee faragelinta dabiiciga ah ee kiciya cusboonaysiinta unugyada asliga ah ee xubin ama nidaam.
Daraasaddan waxaa lagu daabacay qodobka Juun 2014 ee qormooyinka loo yaqaan "Cell Stem Cell" oo ay sameeyeen cilmi-baarayaal ka socda Jaamacadda Koonfurta California Cilmi baaris ayaa muujisay in wareegyada soonka ee dheereeya ay ka difaacayaan nidaamka difaaca waxyeelada iyo keenida dib u soo cusboonaysiinta nidaamka difaaca jirka. Waxay ku soo gabagabeeyeen in soonka ay ka weecdo unugyada xaalad daganeed una gudubto xaalad is-cusboonaysiin. (1)
Tijaabooyinka caafimaad ee bini-aadamka waxaa lagu fuliyay iyadoo la adeegsanayo bukaannada ku daweynta kemotherabi. Muddo dheer, bukaanku ma cunin, taas oo si weyn hoos ugu dhigtay tirada unugyada cad ee dhiiga. Jiirka, wareegga soonka "wuxuu ku dhaqaaqay habka dib u cusboonaysiinta, isagoo beddelaya dariiqii tilmaamaya ee unugyada stematopoietic, kuwaas oo mas'uul ka ah jiilka dhiigga iyo nidaamka difaaca." (1)
Ma saadaalin kari laheeyn in soonka soonka uu ku yeelan doono saameyn la taaban karo xagga kobcinta unugyada asliga ah ee nidaamka dhiigga dhiigga. Markaad gaajoodo, nidaamku wuxuu isku dayaa inuu badbaadiyo tamarta, iyo waxyaabaha ay sameyn karto si ay u badbaadiso tamar waa inaad dib u soo ceshato unugyo badan oo ka hortag ah oo aan loo baahnayn, gaar ahaan kuwa. taasi waxyeeli karto. Waxa aan bilownay inaan ku aragno labadaba bini aadamka iyo jiirka ayaa ah in tirada unugyada dhiiga cad ee dhiiga ku dhacayaan sooman yihiin oo dheer. Markaa markaad wax quudiso, unugyada dhiiga cad way soo laaban doonaan. Valter Longo, qoraa u dhigma. (1)
Mar labaad, maxaa yeelay soonka waxay si weyn hoos ugu dhigeysaa tirada unugyada dhiiga cad ee dhiiga, waxay kicisaa soo cusbooneysiinta unugyada asliga ah ee nidaamka difaaca jirka. Tan ugu muhiimsan, waxay hoos u dhigeysaa enzyme-ka PKA, oo lala xiriiriyay gabowga, buro ku dhaca, iyo kansar. (1) Waxaa kale oo muhiim ah in la xuso in soonku ka ilaaliyo sunta markay tahay tijaabada tijaabada caafimaad ee bukaanku ay soomanaayeen muddo 72 saacadood ah kahor daaweynta kemotherapy.
Chemotherapy waxay u keentaa dhaawac culus oo ku xiran nidaamka difaaca. Natiijooyinka daraasaddaani waxay soo jeedinayaan in soonka uu yareyn karo qaar ka mid ah dhibaatooyinka halista ah ee kiimiko. Co-Author Tanya Dorff (1)
Soonka waa caado qayb muhiim ka ahayd dhaqammo badan oo qadiim ah, min Vedic ilaa Buddhist iyo inbadan, soonka waa inaan lagu khaldin gaajada. Waa geedi socodka xakameynta naftaada iyo xakameynta khibrada dareenka ee cunida isla mar ahaantaana hubinta inaad si sax ah u sameyneysid. Markaan soomanahay badiyaa waan soomaa biyo waxaanan sameeynayay ku dhawaad ​​sideed sano hada hadana waxaan dareemayaa wanaag iyo firfircoonaan kadib markaan sameeyo.
Raadin dheeraad ah
Soomiddu waxay ka caawisaa sidii looga hortagi lahaa cudurada maskaxda
Baarayaasha xarunta Machadka Qaranka ee Aging ee Baltimore ayaa helay caddeyn ah in soonka hal ama laba maalmood usbuucii ay ka hortegi karto saameynta cudurka Alzheimer iyo cudurka Parkinson. Daraasad ayaa sidoo kale lagu ogaaday in yareynta qaadashada maalinlaha ah 500 kaloori maalin kasta laba ka mid ah toddobada maalmood ay muujin karto faa'iidooyin cad oo loogu talagalay maskaxda.
Soonku wuxuu yaraynayaa halista cudurka wadnaha iyo sokorowga
Inaad maalin maalin cunto la'aan haysato waxay yareyneysaa halista cudurka wadnaha iyo sokorowga. Daraasadaha ayaa muujinaya in soonku sii daayo wax ku ool ah hormoonka koritaanka aadanaha, kaas oo lala xiriirinayo dheef-shiid kiimikaad iyo dufan dufan. Joojinta baruurta ayaa caan ku ah yareynta halista cudurada wadnaha iyo sokorowga. Dhakhaatiirta ayaa xitaa bilaabay inay tixgeliyaan soonka sidii daaweyn.
Soonku wuxuu si wax ku ool ah ula dhaqmaa kansarka unugyada aadanaha:
Daraasad lagu sameeyay joornaalka sayniska ah ee gabowga ayaa lagu ogaaday in bukaannada kansarka ee ku daweeya soonka daawayntooda ay la kulmaan waxyeelo yar oo ka timaadda kemotherapy. Dhammaan baaritaanadii ilaa iyo hadda la sameeyay waxay muujinayaan in soonku uu wanaajinayo badbaadada, uu gaabiyo koritaanka burooyinka isla markaana uu xaddido faafitaanka burooyinka. Machadka Qaranka ee Aging wuxuu sidoo kale bartay nooc ka mid ah kansarka naasaha oo si faahfaahsan looga fahmo saameynta soonka ee kansarka. Soonka kadib, unugyada kansarku waxay isku dayeen inay sameyaan borotiinno cusub waxayna qaateen talaabooyin kale oo ay ku sii wadaan inay sii koraan oo ay u kala baxaan Natiijada ka dhalatay talaabooyinkan, oo iyana horseeday tiro kale oo tallaabooyin ah, ayaa dhaawacaysa moleekuleyaasha xag-jirka ah ee bilaashka ah ee la abuuray kuwaas oo burburiyey unugyada kansarka 'DNA ee sababay burburintoodii. Waa is dilid, unugyada kansarku waxay iskudayaan inay bedelaan dhamaan waxyaabaha ka maqan dhiiga ee ay u baahan tahay inay noolaato mudo sooman kadib, laakiin ma awoodi karto. Taa baddalkeed, waxay isku dayeysaa inay abuurto taasina waxay horseedaysaa burburinteeda.
Mar labaad, hubi inaad sameyso cilmi baaristaada kahor intaadan tan isku dayin. Waxaan rajeyneyaa inay tan kaa sii qaadan karto inaad arrinta fiiriso haddii aad runtii xiisaynayso.
[mod-egg module = alaabada Amazon = ”en-B01MDM93KB” '
Hadana hadii aan joojino cunida in yar, waqti ka waqti
1 cusub oo ka yimid 15,60 €
Iibso 15,60 €
ilaa Ogoosto 10, 2020 11:29 pm
Taariikhda lagu sii daynayo 2016-08-10T00:00:00.000Z
Publication Taariikhda 2008-08-01T00:00:00.000Z
Source: JOOJI LIISKA
Haweeney Afrikaan Mareykan ah ayaa tababbaraysa cirbadaha NASA
Baro sifooyinka wanaagsan ee bogsashada ee todobada boqoshaadan
Gabayadii Matieu Grobli
KU SAMEE QODOBKAAGA SITE
Soo iibso alaab soo saare